Sare u kaca iibka gudaha 2015 | Martech Zone
Talaado, Juun 9, 2015 Talaado, Juun 9, 2015 Jenn Lisak Golding
Sida laga soo xigtay Go'aannada Sirius, 67% safarka iibsadaha waxaa hadda loo sameeyaa qaab dijitaal ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad 70% go'aanka iibka la sameeyay ka hor rajada xitaa bilaabista wadahadal macno leh oo ku saabsan iibka. Haddii aadan bixinaynin qiimaha kahor isdhexgalka koowaad ee aad la leedahay wakiilka, markaa waxaad u badan tahay inaadan tartame u noqon doonin jacaylkaaga rajadaada.
Sida aan wada ognahay, iibka gudaha ayaa sii kordhayay labadii sano ee la soo dhaafay, waana shaqeyneysaa. Rajooyinku waxay si wanaagsan uga jawaabayaan gudaha iibka iibka iyo dhaqamada iibka ee isbedelaya, iyadoo la iska indhatirayo hababka bixitaanka dhaqameed. Laakiin tani waa uun bilowga, iyo warshadan ayaa sii wadi doonta inay isbedesho waqti ka dib.
"Gudaha iibku si dhakhso ah ayuu isu beddelayaa iyadoo lagu saleynayo dabeecadda rajada, wakiillada iibkuna waxay u baahan yihiin inay la qabsadaan si ay u guuleystaan."
Salesvue, ka otomaatiga xoogga iibka kafaala qaaday, soo saaray infographic, Sare u kaca iibka gudaha 2015, oo baaraya wixii la soo dhaafay, hadda iyo mustaqbalka iibka.
Iibinta gudaha ayaa 300% ka dhaqso badan iibka banaanka.
Sida laga soo xigtay Harvard Business Review, wicitaan qabow MA shaqeynayo 90.9% waqtiga.
Hoggaaminta dibedda ayaa shirkaddaada ugu kacaya qiimo aad iyo aad u badan sababtoo ah dadaalka ay ku qaadato in la xiro.
Iibinta bulshada waxay noqon doontaa wax caadi ah.
Ka eeg faafaahinta hoose si aad u hesho aragti dheeri ah oo ku saabsan iibka gudaha. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Salesvue iyo xallintooda otomaatiga iibka, codso demo maanta.
Tags: iibinta b2bgudaha iibkaMacluumaadka Suuqgeyntaotomaatiga iibkaKordhinta Iibkaotomaatiga xoogga iibkaiibka infographics